चिसो पदार्थ पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा यस्तो हुन थाल्छ ! जान्नुहाेस् – Online Khabar 24
चिसो पदार्थ पिउने गर्नु हुन्छ ? पिएकाे एक घन्टा पछि शरिरमा यस्तो हुन थाल्छ ! जान्नुहाेस्
माथि follow गरेर मात्र पढदिनुहोला है ,
अाजकल बजारहरुमा चिसो पेय पदार्थको बिक्रि बढ्दो छ।
तर के यस्ता कोल्ड ड्रिङ्क्स स्वास्थ्यको लागि फाइदजनक छन् ? इंगल्याण्डका एक चिकित्सा विशेषज्ञ निरज नाइकले एक अध्ययनमा कोकलगायतका कोल्ड ड्रिंक्स पिएपछि एक घन्टासम्म शरीरमा कस्ता असर देखिन्छ पत्ता लगाएका छन्।
१. कोल्ड ड्रिंक्सको २०० मिलीलिटरको बोतलमा लगभग १० चम्चा चिनी हुन्छ । जुन सामान्य रुपमा एक व्यक्तिको दिनभरको खाना बराबर हुन्छ । जसले गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्दै जान्छ ।
२. कोल्ड ड्रिंक्स पिएको ४५ मिनेटसम्म शरिर तथा दिमागमा उत्पादन हुने डोपामाइनको कारण मस्तिष्कमा आनन्द महशुस हुन थाल्छ । ३. ५० मिनेटपछि आमाशयमा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र जिंक जम्मा हुन थाल्छ भने पिसाबमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्दै जान्छ ।
४. ४५ मिनेटपछि हड्डीको लागी आवश्यक क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिंक, सोडियम लगायतका तत्वहरु पिसाबसंगै बाहिर निक्लिन्छन् ।५. चिसो पेय पदार्थ पिएको १ घण्टापछि शरिरमा भएको तरल पदार्थ, मिनरल्स तथा पौष्टिक तत्वको मात्रा सकिएपछि हिडाइड्रेसन हुन थाल्छ । शरिरमा पानीको मात्रा कमी हुन थाल्दछ।
६. कोक तथा अन्य कोल्ड ड्रिंक्समा चिनीको मात्रा बढि हुने भएकोले शरिरमा क्यालोरि बढ्दै जान्छ र मोटोपन बढ्छ । विशेष गरी मधुमेह विरामीको लागि यस्ता पेय पदार्थ नखादाँ नै उचित हुन्छ। ७. यसमा सामान्य पानीको तुलनामा कैयौ गुना बढि अम्लिय गुण हुन्छ । जसको कारण ग्याट्रिकको समस्या बढ्छ । अत्याधिक मात्रामा कोक पिउनाले अल्सरको सम्भावना समेत बढ्दै जान्छ । ८. यस्ता पेय पदार्थमा कार्वनडाईअक्साइड प्रयोग गरिएको हुन्छ । जसको कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दै जान्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : विद्यालयहरुमा जंकफुड र कोल्ड ड्रिङ्क्स निषेध , नर्सको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने तयारी ! विद्यार्थीको स्वास्थ्यप्रति चासो दिंदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनबीच सम्झौता गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ’ अभियान अन्तर्गत हरेक विद्यार्थीलाई स्वस्थ राख्न प्याब्सन र एनप्याब्ससँग समझदारी गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले समझदारी पत्रको खाकासमेत तयार पारिसकेको छ। उक्त विषयमा प्याब्सन र एनप्याब्सन पनि सकारात्मक देखिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाका प्राविधिक सल्लाहकार अमित अर्यालले जनाएका छन्। उनका अनुसार केही दिनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
मन्त्रालयले तयार पारेको समझदारी पत्र अनुसार ‘एक विद्यार्थी एक खेलकुद’ भन्ने नारासहित हरेक विद्यार्थीलाई कुनै एक खेलकुदमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रत्येक विद्यालयमा एक जना नर्सको व्यवस्था गरी विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षा दिन तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र स्वस्थ व्यवहार अवलवन गराउनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, विद्यालय हाताभित्र चिनीयुक्त गुलियो पेय पदार्थ (कोल्ड ड्रिङ्क्स) र जंकफुड बर्जित गर्ने र घरमा तथा टिफिनमा बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा दिन अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता बुँदा सम्झौता पत्रमा हुनेछन्।
भविष्यमा नागरिकले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँदै उत्पादनशील जीवन बिताउन सकुन् भनेर विद्यालय तहबाटै असल आचरण सिकाउनुपर्ने यो अभियानको लक्ष्य रहेको अर्यालले जनाए । उनले भने, ‘नसर्ने रोगहरु तनाव, जीवनशैली, खानपान र वातावरणसँग सम्बन्धित रहेकाले यस्ता व्यवहार उमेर पुगेपछि परिवर्तन गर्न कठिन हुने भएकाले बाल्यकालदेखि नै निरोगी र स्वस्थ राख्न अभ्यस्त गराउनुपर्ने हुन्छ।’
यो अभियानबाट बाल्यकालमै वंशाणुगत रोग तथा अन्य समस्याको पहिचान र उपचार गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ। बालबालिकालाई पोषिलो खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीको बानी बसाउन यो सम्झौताले ठूलो भूमिका खेल्नसक्ने बताइएको छ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई मन्त्रालयले विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनका लागि आवश्यक चेतनामूलक अध्ययन सामाग्री, ब्रोसरहरू, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अवश्यक उपकरण, विद्यालयमा कार्यरत नर्सको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिमुखीकरण तालिम लगातयतका सहयोग गर्नेछ।
गर्मीमा ‘कोल्ड ड्रिङ्क्स’ को सट्टा मही पिउनुहोस्, यस्ता छन् फाइदा: शहरी क्षेत्रमा महीको महत्व थाहा हुँदैन । दही–महीभन्दा पनि बजारमा पाइने चिसो पेय पदार्थमा मानिसहरूको आकर्षण बढ्दो पाइन्छ । बजारमा पाइने चीसो पेय पदार्थले मानव स्वास्थ्यलाई पाइदा पुर्याउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु खान छाड्दैनन् । गर्मी मौसममा आमाबाबुले बालबालिकालाई चिसो पेय पदार्थ दिने गर्छन् ।
यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्छ । कोक, फेन्टालगायतका पेय पदार्थले त असर गर्छ नै, बट्टामा राखिएका फलफूलको जुसले पनि धेरै असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर बजारमा पाइने पेय पदार्थ भन्दा मही खानु निकै उत्तम हो । अझ गर्मीयाममा मही खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
मही खानुका फाइदाहरू यस्ता छन्- गर्मी याममा शरीरमा आलस्यता आउँछ। महीको सेवनले शरीरमा स्फूर्ति बढ्नुको साथै पानीको मात्रा पनि आपूर्ति गर्ने गर्छ । महीले गर्मी याममा शीतलता प्रदान गर्नुका साथै गर्भवतीका लागि मही अति नै उपयोगी मानिन्छ ।
महीमा पाइने ‘प्रोबायोटिक’ले गर्भावस्थामा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सहयोग गर्छ। महीमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाइने भएकोले कब्जियत हुनबाट जोगाउँछ । भुटेको जिराको साथमा मही खाँदा पाचन प्रणाली ठीक राख्‍न मद्दत गर्छ ।
मोटोपना अधिक हुँदा महीमा नुन मिलाएर पिउनु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । साँझबिहान महीको सेवन गर्दा स्मरण शक्ति तेज हुन्छ। पटकपटक बाडुल्की लाग्ने समस्या भए महीमा एक चम्चा अदुवाको रस मिलाएर सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ। शरीरको पोलेको भागमा तुरुन्त मही लगाउँदा आराम मिल्छ । महीमा पिठो मिलाएर तयार गरिएको लेप लगाउँदा छालाको चाउरीपना कम हुन्छ। गुलाबको जरालाई महीमा पिसेर अनुहारमा लगाउँदा डन्डीफोर हराउँछ।
एसी र कोल्ड ड्रिङ्क्स देखी सावधान ! , देखा पर्न सक्नेछन् यस्ता समस्याहरू: गर्मी मौसममा प्राय मानिसहरु एसीमा बस्न र कोल्ड ड्रिङ्क्स पिउन रुचाउँछन् । पहिले मानिसहरु हावा कताबाट आउँछ भनेर शितल खोज्दै हिड्थे भने अचेल कोठाभित्र बसेर टिभी, कम्प्युटर, स्मार्टफोनसँगै एसी र पंखामा बस्ने गर्छन् ।
तर, उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि यि सब कृतिम सामग्रीले हाम्रो शरीरमा कति असर गर्छ भन्ने । इलेक्ट्रोनिक्स र मौसम अनुकूलताका लागि प्रयोग हुने कृत्रिम उपकरणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । मानसिक स्वास्थ्यमा इलेक्ट्रोनिक्सले पार्ने असरबारे अलि धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर, शारीरका विभिन्न अंग तथा प्रणालीमा यसले पार्ने प्रभावबारे खासै चर्चा भएको पाइन्न ।
तपाईं कम्प्युटर या टिभीको अगाडि लामो समयसम्म बस्नुहुन्छ, या एकैठाउँ घोत्लाएर मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ भने पनि तपाईंको हड्डीका लागि यो राम्रो होइन । लामो समय एकै ठाउँ बसिरहँदा शरीर चलायमान हुँदैन, जसले हड्डीमाथि नराम्रो असर पर्छ । गर्मीमा हाम्रो अर्को नजिकको साथी हो, कोल्ड ड्रिंक्स ।
पछिल्लो पुस्तामा कोल्ड ड्रिंक्सको आदत अलि बढी नै छ । तर, यस्ता सोडायुक्त ड्रिंक्सको अधिक सेवन हड्डीका लागि खतरनाक हुन सक्छ । अध्ययनहरुले देखाएका छन् कि सोडा ड्रिंक्समा हुने फस्फोरसले हड्डीलाई नराम्रो असर गर्छ । जानकारहरुको भनाइमा पछिल्लो समय हड्डीका समस्या बढ्दै जानुमा मानिसमा दूधको सट्टा सोडायुक्त ड्रिंक्स पिउने आदत बस्नु एक मुख्य कारण हो ।
उसो त चिया या कफीको अधिक सेवन पनि हड्डीका लागि राम्रो होइन । चिया, कफीमा हुने क्याफिनले पनि हड्डीमा क्याल्सियमको मात्रा घटाउँछ, जसले हड्डीलाई कमजोर बनाउँछ ।
माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ । ज्ञान बिज्ञान डट नेट बाट साभार गरियको खबर
Prevचुकन्दर साह्रै धेरैले हेपेको तर असाध्यै जडी फल हो, जान्नुस यसको चामत्कारीक फार्इदाहरू !
nextयि १० काम गर्नुहुन्छ भने तपाँर्इको मृगौला बिग्रिने खतरा एकदमै ज्यादा छ ।